पलायन (कथाः गोपाल अश्क)
प्रदेश १ मा सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती खानेलाई कारबाही
उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन ६ कक्षादेखि सामुदायिक विद्यालय पढ्नुपर्ने
पश्चिमी वायुका कारण निरन्तर वर्षा : शनिबारदेखि हुनेछ क्रमिक सुधार
पर्यटक बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा २१ चिनियाँसहित ३३ घाइते
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे दाहाल र देउवासँग बालुवाटारमा छलफल
कला/साहित्य शुक्रबार, असोज २४, २०७६
“अलि बिस्तारै बोल, घरमा पाहुना छन् । त्यत्ति मात्र होइन, ऊ त्यो ... के नाउँ हो त्यो केटीको ...अँ...अनु ! ऊ पनि छे, के सोच्छे हाम्रो बारेमा?” पत्नीलाई यति भनेर ऊ कोठाबाट बाहिरियो ।
कान्छोले आफ्नो निर्णय सुनायो, “बुवा ! अनुलाई हजुरहरूले हेरिसक्नु भा’छ । हामी बिहे गरेर अस्ट्रेलिया जाने योजनामा छौं । भिसाको तयारी गरिरहेका छौं । त्यसको लागि बिहेको भिडियो र केही फोटो आवश्यकता पर्‍यो । हाम्रो बिहे गरिदिनुस् । नत्र हामीले आफैं बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ ।” ऊ रूखबाट चुँडिएर झ्रिरहेको पात झैं भयो ।
जेठो छोराको बिहे आउन ६ महीना बाँकी थियो । दुवैतर्फका परिवार खुशी थिए । छोरो हुनेवाला बुहारीसँग मौका मिलाएर घुम्न जान थालेको थियो। कहिलेकाहीं रेस्टुरेन्टमा खाना खानै जान्थे । मोबाइलमा त दिनहुँ कुराकानी भइरहेको थियो ।
बिरामी आमाबुवालाई सहयोग दिने बेला छोरो विदेशिएको छ । पतिले पीडा लुकाएर बोलिरहेको शशिकलाले पनि नबुझेकी होइनन् । उनी बोलिनन्। बरु आँखाबाट बरर्र आँसु चुहाइरहिन् ।
हरेकपटक छोराबुहारीको झगडामा ऊ र उसकी पत्नीमाथि आक्षेप लाग्न थाल्यो । छोराबुहारी एकअर्कालाई गाली गर्दा आमाबुवालाई दोष थुपार्न थाले।
शुक्रबार, माघ ३, २०७६ बेलायती अध्येताले थाले पतौरा मन्दिरको पुरातात्विक अध्ययन
शुक्रबार, माघ ३, २०७६ एमसीसीमा सैन्य मामिला जोडिएको छैनः अमेरिकी दूतावास
शुक्रबार, माघ ३, २०७६ प्रदेश १ मा सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती खानेलाई कारबाही
शुक्रबार, माघ ३, २०७६ उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन ६ कक्षादेखि सामुदायिक विद्यालय पढ्नुपर्ने
रिपोर्ट नेकपा संक्रमणको सन्त्रास
आइतबार, पुस २७, २०७६ गायक पवनको ‘बधाई छ’ सार्वजनिक